Agwaetiti ndị mara mma nke Europe iji gaa njem | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Getaways Europe, General, Islands
Kedu onye na-achọghị ịla n'iyi n'àgwàetiti? Ọ bụ ezie na na nke a anyị anaghị ekwu maka agwaetiti ọzara, ọ bụ maka agwaetiti paradaịs anyị nwere ezigbo nso. Anyị ga-agwa gị banyere agwaetiti mara mma nke Europe ịga njem n'oge ọ bụla, n'ihi na ha na-enwekarị ihu igwe dị mma.
Ọ bụrụ n'agwaetiti bụ ihe gị, ma n'ihi na ị na-amasị oké osimiri na n'ihi na ị na-amasị ihunanya ịhụnanya nke ha na-enwe mgbe niile, lezie anya na ndị a amụma njem. Agwaetiti ndị a magburu onwe ha nke Europe anaghị ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị, ma o doro anya na ha abụrụla ọtụtụ ebe ejiji n'oge na-adịbeghị anya, yabụ na ha bara uru ileta.
Ihe dị mma banyere ịga Canary Islands bụ na ihu igwe dị mma n'afọ niile ma ọ naghị adịkarị mmiri ozuzo, yabụ ọ bụ ezi echiche ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnụ ụtọ obere osimiri n'oge ọ bụla. Tenerife bụ otu n'ime ndị kasị eleta, n'ihi na o nwere ihe na-adọrọ mmasị ị ga-ahụ. N'ebe ndịda ya, e nwere ebe ndị njem nlegharị anya nwere ụsọ mmiri, mana ọ bụrụ na anyị achọghị ka ihe niile na-ada n'ájá, anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ ihe dị mkpa gaa na Teide. Ugwu a na-enye nleta nke elu ya, ọ bụ ezie na ị ga-aga ngalaba ikpeazụ ị ga-ajụrịrị ikike tupu oge ahụ. Gbọ ala USB na-akpọrọ anyị gaa n'akụkụ ya kachasị elu, iji nwee ike ilele agwaetiti ahụ dum na oké osimiri. Gburugburu ugwu mgbawa gburugburu nwekwara ọmarịcha ya, dịka ọ dị ka ebe ọdịda ọnwa.
Na Mallorca ọ ka mma mgbe niile ịga n'oge dị elu, nke dabara na ihu igwe dị mma, ebe ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ na oge oyi anyị nwere ike iwe ọtụtụ ụbọchị mmiri ma ọ bụ ihu igwe na-adịghị mma. Na mgbakwunye, na obere oge ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ na-emechi, yabụ anyị ga-achọ ebe obibi na ndị ka mepere emepe, nke ga-enwe ọrụ ole na ole n'ihi na ha enweghị ọtụtụ ndị ọrụ. Agwaetiti a na-enye anyị ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ na mgbakwunye na ụsọ mmiri ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị abanye na ihu igwe na-adịghị mma, anyị nwere ike ịme onwe anyị obi ụtọ. Anyị ga-aga isi obodo, Palma de Mallorca, ebe mara mma katidral nke Gothic nke Santa María de Palma. Na Lọ Bellver Site na narị afọ nke XNUMX ọ ga-eju anyị anya na ọdịdị ya, anyị ga-enwe ike ịmaba mmiri n'ime ala ma ọ bụrụ na anyị gaa Caves ndị a ma ama nke Drach, nke anyị ga-eyi uwe na-ekpo ọkụ. Obere ọgba a ma ama bụ Cuevas dels Hams, mana ha dịkwa mma.
Sicily bụ nnukwu agwaetiti nke ghọkwara ebe a na-eleta na Mediterenian. N'ime ya ị nwere ike ịga na Ugwu Etna, otu n’ime ugwu ndị na-arụsi ọrụ ike na Europe, nke dị mma maka ndị njem. E nwere a funicular ịgbago na site n'ugwu a enwere echiche dị egwu banyere agwaetiti ahụ dum. Taormina na Palermo bụ obodo abụọ kachasị eleta na Sicily. Na Taormina anyị nwere ike ịhụ mkpọmkpọ ebe nke Thelọ ihe nkiri Greek na Palermo ị nwere ike ịga Katidral nke Monreale. N'ebe ndị dị ka Catania, anyị ga-ahụ ebe kachasị dị mma, na-emebi emebi mana na-adọrọ adọrọ ma na Cefalù anyị ga-ahụ ihe kwesịrị ịbụ oke osimiri kachasị mma na agwaetiti ahụ.
Agwaetiti ọzọ mara mma ebe ị nwere ike ịkwụpụ ma chọta ebe paradisiacal yana ọtụtụ akụkọ ntolite. Na Crete ị nwere ike ịga leta Heraklion, ebe Obí Knossos, onye nke ama ama labyrinth nke minotaur. Na obodo a, anyị nwere ike ịchọta ihe ngosipụta nke mmepeanya ndị kacha ochie, yabụ na ị gaghị agbaghara ụlọ ihe ngosi nka mgbe ochie. Na agwaetiti ị nwekwara ike ịnụ ụtọ Chania, isi obodo mpaghara ahụ, na osimiri ndị dịka Elafonisi.
Santorini abụrụla otu n'ime njem ndị mmadụ niile chọsiri ike. Ebe mara mma nke nwere oke ala mara mma ma nwekwaa ezigbo foto mara mma. Anyị niile maara ụlọ mara mma, na-enwu gbaa ugwu dị elu na-ele kaldera anya. Obi abụọ adịghị ya na agwaetiti nke ghọworo akụkụ nkuku izu ike ma mee ka ọ dị ọhụrụ. Site na Oia ị nwere ike ịhụ ọdịda anyanwụ kachasị mma n'àgwàetiti ahụ na Fira anyị ga-ahụ ụlọ ọcha ndị na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ bụ ihe nnọchianya nke agwaetiti ahụ. Ihe ndị ọzọ a na-emekarị na Santorini bụ dịka ọmụmaatụ njem ụgbọ mmiri iji gaa ugwu mgbawa nke Nea Kameni na Palea ma ọ bụ njem ịnyịnya ibu n'obodo Fira, ihe a na-eme n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ na Gris.
Ibiza bụ agwaetiti ndị ọzọ na-ejupụta na ndị mmadụ n'oge ọkọchị, mana ha bụrịrị ebe dị mkpa. Na Ibiza anyị nwere ụlọ ịgba egwu abalị dị ka Ushuaia, nke na-enye njem nlegharị anya nke abalị na Europe dum. Ma na mgbakwunye na nke a ị nwere ike ịga ebe ndị na-atọ ụtọ. Obodo Ibiza na-enye anyị mpaghara ochie, nke a maara Dalt-Vila, ma ị ga-ahụkwa San Antonio, ma nwee obi ụtọ n'ụsọ osimiri dịka Playa d'en Bossa ma ọ bụ Cala Salada. Cave Can Marçá nwekwara nleta a ga-emerịrị, ebe ọ bụ ọgba oge ochie nke ihe karịrị 100.000 afọ dị na ugwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Agwaetiti ndị mara mma nke Europe iji gaa njem